Umbuzo ka ungafika kanjani "Sheremetyevo" iyafaneleka ngoba Muscovites, futhi izihambeli eziningi. Kodwa uma izivakashi mgwaqo ngokuvamile nje engaziwa khona, abakhileyo zabomdabu inhlokodolobha bazibuze ukuthi ukuya esikhumulweni sezindiza nge ukulahlekelwa sakugcina isikhathi nezinzwa.
Indlela ukuya esikhumulweni sezindiza "Sheremetyevo"
Kutholwe main emoyeni esangweni yezwe imayelana eziyishumi amakhilomitha kusuka eMoscow kuya Leningrad Highway, ensimini ka esifundeni lwedolobha Khimki. Kodwa ukuthola lapha akulula ngaso sonke isikhathi. Ukuphendula umbuzo mayelana nendlela ufika "Sheremetyevo", kubalulekile ukuba acabangele izici eziningi zokuphila eMoscow. Evelele idingekile ukuze isiminyaminya, okuyizinto kuyi-Leningrad onguthelawayeka ngokuvamile ngempela ngesikhathi rush amahora eside thwebula noma yikuphi ukunyakaza kuso. Ekupheleni kwesonto, lapho abaningi umhlambi eya ezweni, ukuthi isimo sibi kakhulu kunalokho i phakathi nesonto abavamile. Kulezi sezimo ezingezinhle, kufanele makudle wesitimela ngesikhathi Impendulo yombuzo kanjani ukuya "Sheremetyevo". Izikhangibavakashi lapha Aeroexpress kusukela Belorussky Station kuthatha isikhathi esingaphezu kwesigamu nje sehora. Esikhathini ejwayelekile ithikithi intengo ruble 320 uhambo uyosindisa amandla amaningi ethukile. Mhlawumbe lena kuphela indlela okuqinisekisiwe hhayi ekuminyekeni komgwaqo futhi lwephuze indiza. Business Class Travel e imoto kanokusho izobiza ruble 900. Kulabo abane ukuya "Sheremetyevo" ngokuvamile zenzeka uhlelo izaphulelo kanye amabhonasi. Kodwa ngokungenisa i Aeroexpress, kufanele kukhunjulwe ukuthi akunakwenzeka ukuya esikhumulweni sezindiza ezikhumulweni C no B. Ukuze uthole lezi izinto kuyodingeka ukuzidlulisela ku ibhasi ekhethekile oluzothatha lapho mahhala.
Ungasebenzisa ezokuthutha zomphakathi. Izokubiza ingasaphathwa. Kodwa ukuya uma uhamba ngebhasi noma itekisi kungcono kakhulu uma kukhona enkulu ngokwanele phambili isikhathi ngaphambi kokuhamba, uma kungekho umbuzo mayelana nendlela ufika "Sheremetyevo" ngokushesha ngangokunokwenzeka. Indlela elula ngabo ukuba zihlale phansi esitobhini zokugcina eziteshini of the komhlaba "River Station" futhi "Glider". Imizila eziqhutshwa ubusuku nemini futhi ithunyelwa "Sheremetyevo" at esingaba imizuzu eziyishumi kuya isigamu sehora kuye ngesikhathi sosuku. Imali siyahluka kakhulu (ruble 28 70). A taxi ride kuya "Sheremetyevo" kuzothatha isigamu sehora kusukela maphakathi no izobiza ruble neshumi nanhlanu. Kodwa kungenjongo ukungabi khona isiminyaminya, engesiyo kuphela ebusuku.
Kungenzeka yini ukuba ufike esikhumulweni sezindiza on the esitimeleni?
Hhayi okwamanje. Ngaleso sikhathi samanje kumelwe sikhethe ngokukhethekile phakathi izindlela eliwumhlaba zokuthutha uma kuziwa ufune indlela athole 'Sheremetyevo ". Metro kuhlelwe ukubamba kuphela lusekude kakhulu. Kuleli qophelo ngesikhathi kuba esigabeni design. Lona okuthiwa "Skytrain", umugqa okuzokwenza ukuxhuma eMoscow Khimki. esiteshini Terminal kufanele ebekwe esigabeni "Sheremetyevo". Kodwa iqiniso lokuthi lolu hlelo uzobe owawusekelwe ngokoqobo, kusemasisha kakhulu ukusho.